त्यो बिहान जब तेजबहादुरलाई भतिज लोकबहादुरले देखे त्यसपछि….. – Classic Khabar
September 11, 2021 115
संखुवासभाको मादीमा ६ जनाको ज्या’न लिने भतिज नाता पर्नेले गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उमलिङको खोला गाउँमा सोमबार एकै परिवारका ६ जनाको ज्या’न लिएको आरोप २५ वर्षीय भतिज पक्राउ परेका हुन्। बौदमान कार्कीका जेठो दाजुका भतिजलाई घट्नामा सं’ल’ग्न भएको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
५ दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले लोकबहादुरलाई पक्राउ गरेको छ। घट्ना घटाएपछि पनि लोकबहादुर घरमै थिए। उनले एक्लै सबैको ज्या’न लिएको स्वीकार गरिसकेको अनुसन्धानमा सं’लग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
प्रहरीले घट्नाको आरोपमा पाँच दिनपछि आफन्तलाई नै पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालेको छ। पक्राउ परेका उनको घर घटना स्थलबाट करिब डेढ सय मिटर टाढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदीले बताए। लोकबहादुरले सुरुमा तेजबहादुरलाइ ज्या’न लिने क्रममा जोड ले चि’च्या’एर कराएको थाहा पाएपछि परिवार नै सखाप बनाएको प्रहरीलाई बताएका छन्।
तेजबहादुरले आफूलाई पहिला नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको लोकबहादुर ले बदला लिन अघि बढेका थिए। उनि माथि उकालो लाग्दै गरेको देखेपछि आँगनमा रहेको दाउरो टिपेर उनी तेजबहादुरलाई प्रहार गर्न अगाडि बढेको बताएका छन्। डिल उक्लिँदै गरेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टा’उकोमा प्र’हा’र गरेका थिए।
तेजबहादुरको ज्यान लिने क्रममा जोड ले चि’च्या’एर कराएको थाहा पाएपछि उनकी श्रीमती कमला कार्की र बुहारी रञ्जना कार्कीले देखेपछि घटनास्थलमा पुगे। त्यसपछि उनले उनीहरुलाई पनि ल’खे’टी ल’खे’टी ज्या’न लिएको बताएका छन्।
‘ए यो लोकेले मा’र्‍यो भन्दै आउँदा उनलाई पनि हि’र्का’एको बताएका छन्,’ एक स्थानिएले भने। सासु ढ’लेको देखेपछि बुहारी अगाडि बढ्दा उनलाई पनि हि’र्का’एको लोकबहादुरले बताएका छन्। आमा र हजुरआमालाई ह’ ‘त्या गरेको ८ वर्षका विपिन कार्की र पाँच वर्षीया गोमा कार्कीले देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरुलाई लखेटेर बारीमा ह’ ‘त्या गरेका थिए ।
‘दुई नातिनातिना दौ’डा’दौ’ड गर्दैगर्दा उनीहरूलाई ले’खे’टी ल’खे’टी दा’उ’राले हि’र्का’एको प्रहरी सामु उनले बताएका छन्। त्यसपछि घरमा पसेर लोकबहादुरले कुँडो पकाइरहेकी ८४ वर्षीया पार्वतीको ह”त्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए ।
कुँडो पकाएको ठाउँमै पार्वताको शव फेला परेको थियो। उनीसँगै अर्का एक व्यक्तिलाई पनि ह’ ‘त्यामा सहयोग गरेको आ’शं’का’मा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
जग्गा किन्ने तयारीमा रहेका कार्की परिवारको ह’ ‘त्या आर्थिक कारणले भएको सुरुमा अनुमान गरिएको थियो। तर घरमा भएको नगद र गरगहना सुरक्षित भेटिएपछि प्रहरीले अन्य रिसिबीका कारण भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो। उनी घट्ना पछि अनुसन्धानमा प्रहरी खटिएका बखत त्यतै देखिन्थे, पत्रकार तथा स्थानीयसँग घटनाबारे कुराकानी पनि गर्थे।
Prevतीज मान्न माईत आएकी छोरीलाई अचानक घरमा बोलेर किन गरियो ह त्या ?
Nextबच्चा नहुने महिलालाई, बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै पंडित आफैं जुटेपछि…
यी चार जना जसले सार्वजनिक जिल्ला अध्यक्षको घरमा पसेर जे गरे त्यो देखेर सबै हैरान !
बाटोमा हिंडिरहेको बेला मोटरसाइकले ठ क्कर दिँदा प्रहरी इन्सपेक्टरको मृत्यु
विना कसुर ४० वर्ष भारतको जेलमा बसेका इलामका दुर्गाप्रसादका बारेमा फेरी भारतीय अदालतले गर्यो यस्तो निर्णय